XinleHong 4 4x9125 RC Uphengululo lweMoto | Iindaba zeGajethi
Uhlalutyo lwemoto olulawulwa ngonomathotholo 4 × 4 XinleHong 9125
Namhlanje sizamile XinleHong 9125, enamandla 4 × 4 imoto elawulwa ngonomathotholo Iyabonakala ukonwaba kwayo kunye nokusebenziseka lula, okuye kwasivumela ukuba sonwabele iintsuku ezininzi zolonwabo ngaphakathi kofikelelo kubo bobabini abaqhubi beenqwelomoya kunye nabo basebenzisa kuphela imoto elawulwa kude ngamanye amaxesha. Kwaye konke oku ngaphantsi kwe- $ 90 ngokunqakraza apha Awufuni kuyibona?
1 Uyilo olunefuthe
2 4 × 4 RC ukuqhuba imoto
3 Isiphelo sovavanyo
Kukho iimoto ezingena ngamehlo kwaye le yenye yazo. Ngokukhawuleza xa sivula iphakheji siyazifumana imoto elungileyo enobungakanani, Unikwe iivili ezinomtsalane kunye nokujonga phakathi phakathi kweBigfoot kunye nohlobo lweTrust Course truck. Sizakuzama!
4 × 4 RC ukuqhuba imoto
Yiyo Imoto elawulwa ngonomathotholo iRR ngokupheleleyo, Ngaphandle kweebhetri zeemitter ezisebenzisa iibhetri ezintathu zeAA ezingafakwanga kwiphakheji. Ikwabandakanya isikrufu sokukhwela kunye nokwehlisa iivili, into elula enkosi kumnatha omnye ophakathi. Yenza ibhetri ngokulula (itshaja ifakiwe), yibeke emngxunyeni, uvale isiciko kwaye ungaqala ukuziqengqa.
Ulwakhiwo lubonakala lomelele kwaye lubhetyebhetye ngaxeshanye, ke kuyabonakala ukuba iya kumelana neempembelelo eziya kuthi ngokuqinisekileyo zifumane. Into yokuqala ebonakalayo kukuqina kokutsala okukhulu kwaye kulula ukuqhuba. Ubumnini bukhawulezi kwaye buchanekile enkosi kwi-servo enamandla ngokwaneleyo. Kuqhelekile ezimotweni zoluhlahlo-lwabiwo mali ukuba i-servo inqabile, kungoko ingumbono weXinleHong 9125.
La Isantya esiphezulu esichaziweyo yi-46 km / h, ebonakala ngathi inethemba kum. Imoto ibaleka kakhulu kodwa andicingi ukuba iyakufikelela kulaa nani nangona kuyinyani ukuba khange sikwazi ukuyilinganisa. Ngayiphi na imeko, asisayi kuphosa santya siphezulu kuba, njengoko sisitsho, yimoto enesantya esaneleyo kunye nokuhamba ngokukhawuleza kuninzi lwabathengi beli hlobo lwemveliso.
Ukuthetha ngesantya, Ndothuswe ngokuqinisekileyo luzinzo olunalo enkosi ngokuyinxalenye kububanzi bengoma ebanzi kunye nohlobo lwamavili kuyo. Ngaba ngokwenene Kunzima ukuyilahla kumagophe ngento esinokuzibamba ngokulula ngayo ngesantya esiphezulu. Ukongeza, xa ukhulula i-accelerator imoto ilayisha ubunzima obuninzi ngaphambili kwaye kube lula ukujikeleza ezona mbombo ziqinileyo ngeskididi esimnandi.
Inqaku elibuthathaka kukumiswa, yinkqubo elula kakhulu ngaphandle kweoyile Yinto entle leyo, kodwa kuyaxolelwa kuthathelwa ingqalelo iindleko zemoto ezingafikeleli kwi-90 yeedola.
Emva phantse Imizuzu eli-10 yovavanyo olukhulu ibhetri ithe yanele kwaye kufuneka siyitshaje kwakhona. Ixhobisa ibhetri eyi-1.600mAh LiPo elula, ephantsi ngokomthamo wokufumana imoto, kunye nohlobo ezimbini zeemoto ezi-brashi ezingama-390. Ubuncinci inani elichaziweyo lisondele kakhulu kwelokwenyani, ngokweedatha ezilinganiswe kwitshaja yethu yesiqhelo.
Emva kovavanyo sikhangele imoto kwaye yonke into ibonakala ngathi ikwindawo. Wonke umntu iibheringi ziyintsimbi kunye neendawo zothumelo ngokunjalo, ukuqinisekisa ubuncinci bexesha kunyango olunzulu. Umvelisi ukwathi awunamanzi, nangona sicebisa ukusetyenziswa ngokulingeneyo ukuba sifuna ukunqanda ukonakala. Ayifani nokuhamba ingca emanzi kunokuhamba emanzini anzulu.
Ukushwankathela, ukuthengwa okucetyiswayo ukuba sijonge imoto emnandi kakhulu esinokuzonwabisa ngayo ngaphandle kweengxaki. Kwakhona, kwimeko ye- engalindelekanga Kukho ikhathalogu yezahlulo zeintanethi.
I-4x4 imoto elawulwa ngonomathotholo i-XinleHong 9125
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uhlalutyo lwemoto olulawulwa ngonomathotholo 4 × 4 XinleHong 9125
Indlela yokuhambisa iifoto ukusuka kwi-iPhone ukuya kwikhompyuter yakho